Te ‘Hanao Fety Foana’ ve Ianao? (Ohabolana 15:15)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Xhosa Zoloa Éwé
“Manjombona foana ny andron’ny ory, fa ny olona manana fo falifaly kosa toa manao fety foana.”—Ohabolana 15:15.
INONA no dikan’izany? Ny olona mifantoka loatra amin’ny lafy ratsin’ny fiainana no lazaina hoe “ory” eo. Lasa “manjombona foana” àry ny androny, izany hoe kivy foana izy. Ilay hoe “manana fo falifaly” kosa dia olona mifantoka amin’ny lafy tsaran’ny fiainana, ka toy ny “manao fety foana” izy satria finaritra lalandava.
Marina fa manana olana daholo isika, ka tsy voatery ho falifaly be foana. Na izany aza, dia ireto misy torohevitra hanampy antsika ho faly na dia misy zava-manahirana aza:
Atreho aloha ny androany, fa aza miady saina be amin’izay olana mety hitranga amin’ny hoavy. Hoy mantsy i Jesosy Kristy: “Aza manahy mihitsy ny amin’ny ampitso, fa ny ampitso hanana ny fanahiany. Ampy ho an’ny andro tsirairay ny ratsy mitranga eo aminy.”—Matio 6:34.
Rehefa kivikivy ianao dia soraty amin’ny taratasy izay zavatra nahafaly anao, ka ireny ifantohana. Ankoatra izany, dia aza eritreretina be izay tsy nety nataonao taloha. Ataovy anatra ho amin’ny sisa fotsiny ireny ka tohizo ny fiainanao. Manaova hoatran’ny olona mitondra fiara: Manopy maso kely fotsiny an’ilay fitaratra ahitana ny any aoriana izy, fa tsy hoe mifantoka be any. Tadidio koa fa ‘tena mamela heloka Andriamanitra.’—Salamo 130:4.
Raha misy olana mampiady saina anao, dia aza misalasala miresaka amin’izay olona mahay mampahery anao. Milaza mantsy ny Ohabolana 12:25 fa raha mitebiteby isika ka kivy, dia ‘ny teny soa no mahafaly ny fontsika.’ Mety ho avy amin’ny mpianakavy izany “teny soa” izany, na koa avy amin’ny namana azo itokisana, izay tsy mpanakiana lava fa “tia amin’ny fotoana rehetra.”—Ohabolana 17:17.
Tena nanampy olona maro ho faly ny torohevitry ny Baiboly, na dia niatrika olana aza izy ireo. Enga anie ka hanampy anao koa ireo torohevitra ireo!
Hizara Hizara Te ‘Hanao Fety Foana’ ve Ianao?